Syria: Naaton’ny Ligy Arabo Ny Maha-mpikambana An’i Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2011 9:08 GMT
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana mikasika ny Hetsi-panoherana ao Siria ny taona 2011.
@bencnn: Aza raisina ho fifidianana mnkamin'ny fanomezan-danja ny fahalalahana ny fampiatoana an'i Siria. Fifidianana hanoherana an'i Iran io, tahotra an'i Iran aorian'i Etazonia aty Afovoany Atsinanana.
@RedRazan: Hanampy betsaka ireo revolisionera ao #Syria ny fanapahan-kevitry ny Ligy Arabo, saingy tadidio fa ny LA tsy hanao zavatra mitovy amin'izany velively ho an'i Bahrain
@iyad_elbaghdadi: Amin'ny endrika mavesabesatra kokoa, ny #ArabLeague dia niantso ny tafika ao Syria tsy hanaiky ireo baiko ho famoretana ny sivily.
@SalmaShuk: Fa nahoana ny Ligy Arabo no nanapa-kevitra hampiato ny maha-mpikambana an'i Siria fa tsy ny an'i Yemen na i Bahrain?
@IRAQIRevolution: Naaton'ny Ligy Arabo ny maha-mpikambana an'i Siria ary nangataka ny hampodiana ireo masoivoho [avy any Damaskaosy] ary Irak dia tsy nandray anjara [tamin'ny fifidianana]???? Tsy ity ihany ve ilay Siria loharanon'ny fampihorohoroana e?
@_TheZee: Ny tena hevitro! RT @StayStrongLibya: Fantatro fa tsy misy ilàna azy ny #AL saingy heveriko fa fihetsika tsara sy mendrika izany.
@Weddady: Hoatrinona no sahinao ilokàna fa hisy handoro io masoivoho trano foana ao Damaskaosy io? Ny ahy 5 noho 1
@Ugaritian: Ny irak'i #Assad ho any amin'ny #ArabLeague dia mandrahona an'i Qatar sy ireo firenena Arabo hafa ny mety hisian'ny “tafiotra tsy ho ela.” #Syria
Ilay Siriana Shakeeb Al Jabri, izay manara-maso ny Fahitalavitra Syria TV momba ny fanehoan-kevitra nentin'ilay fifidianana nataon'ny Ligy Arabo dia manoratra hoe :
@LeShaque: Mpiantso t amin'ny Addounia TV: Ny Siriana 23 tapitrisa dia tsy faly amin'ny Ligy Arabo.
@LeShaque: Lohateny lehibe tao amin'ny vohikala Steps mpomba ny fitondrana ao Syria: Nisintaka tsy handray anjara amin'ireo Fihaoam-ben'ny LA i Syria
@monaeltahawy: Na eo aza ny tsy fahatokisako loatra ilay didy jadona fampiatoan'ny Ligy Arabo an'i Syria, lehibe ny hijerena ny hatezeran'ireo mpanaraka an'i Bashar izay zohiako.
@monaeltahawy: Mahavariana fa ny valintenin'i Siria ho an'ny LA dia miteny amintsika hoe nofarananay ny anay raha ianareo kosa mbolka ilaozanareo mamono ny vahoakanareo ary “fanohanana” toy izany no andrandrainay avy aminareo. Tsy milamina
@The_47th: Efa miandrandra sahady aho atsy ho atsy hetsika goavana fombàna an'i Assad, fanoherana zavatra hafa koa manerana ny tontolo.Sento … Tsy maka lesona mihitsy ireo mpanao jadona.
Tao amin'ny Facebook ihany koa, nisy antso nalefa hanapotehana ny Filankevitry ny Fiaraha-miasa any amin'ny Golfa, izay ivondronan'i Bahrain, Arabia Saodita, Qatar, Koety, OmanEmirà Arabo Mitambatra. Ilay vondrona, izay manondro ny Golfa Arabo ho toy ny “mpisotro pipin-drameva”, dia miteny hoe :